I-Cottage Road Cottage
(336 okushiwo abanye)
Ikhanya futhi ivuleke ngenkathi ithokomele futhi inethezekile konke ngesikhathi esisodwa. Le suite yezivakashi ikunikeza eyakho indawo yokungena yangasese, ikhishi, umbhede ongusayizi wenkosi kanye nokuchayeka kwaseningizimu ngokubukwa kolwandle. Indlela eya ogwini namamayela ogwini lwaseSandy ingamamitha angu-100 ukusuka endlini encane ngaphandle kokubhekana nokuwela i-hwy ukuze ufike lapho. Ibhishi elilungele izilwane ezifuywayo lisetshenziswa kakhulu abantu bendawo abazi ngale ndawo ekhetheke kakhulu ukuletha izilwane zabo ezifuywayo ukuthi zizodlala.
Sicela ugcine izilwane ezifuywayo ngaphandle kwegceke elingaphambili nangemuva lekhaya, lesi sikhala ngesabahlali besikhathi esigcwele ekhaya elikhulu kuphela. UMA ULETHA INJA, SICELA USAZISE UKUZE SILUNGISE ISIKHALA EYODWA. Indawo eyodwa yokupaka izimoto ku-driveway iphambi kwewindi elibheke ngasentshonalanga. Sicela uhlale ngakwesokudla ukuze ungavimbeli indlela yokungena egalaji, . Ikhaya alinaso isitofu sokupheka esingu-220. Ihhavini elikhulu le-toaster, i-microwave, ipuleti elishisayo kunikezwa ukuze ulisebenzise kanye nesiqandisi esigcwele nosinki. Amaphesenti ayishumi enani lasebusuku libuyiselwa eLincoln County ngentela yokulala yesikhashana.
4.99(336 okushiwo abanye)
4.99 out of 5 stars from 336 reviews
4.99 · 336 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-336
Coast Road phambi kolwandle ohlangothini olusentshonalanga. Umgwaqo awugandayiwe ngakho lindela izimbobo zamabhodwe. Izimoto emgwaqeni zincane. Uhambo olufushane oluya epaki yeSeal Rock State enyakatho nje. Ibhishi lonke liyisihlabathi esinezitshalo ezinkulu ze-Basalt rock formations. Ungakwazi ukuhamba yonke indlela eya e-Waldport Bridge eningizimu.
Ezinsukwini zemvula umzila weCummins Creek uyindlela enhle yokuphumela ogwini lolwandle futhi uqhelelane nezixuku. Le nhloko yomzila itholakala kumamayela angu-4 eningizimu ye-Yachats Oregon, futhi ingaphansi kwemayela ukusuka eThor's Well. Umzila uyiluphu yamamayela angu-5.9, kanti ezinye izingxenye eziwumqansa zomzila zilinganiselwe njengezinzima.